Qwixx: Imwe Dice Game, akawanda akasiyana - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Dzimwe nguva unonakidzwa chaizvo nekutamba mutambo uye uchiri kuda zvimwe zvakasiyana. Kana iwe uchida Qwixx, haugone kungodzokera kumashure kune akawanda ekuwedzera, asiwo pane akawanda akasiyana.
Imwe post yapfuura yaive nezve Kuwedzerwa kweQwixx. Mune ino post ikozvino zvakasiyana zvakasiyana-siyana zvemutambo pachirongwa. Kuti ujekeswe: Sekuwedzera ini ndinofunga mitambo inoda mutambo wepasi uye ndinoshandisa imwe chete block nyowani (Kusarudzika apa Qwixx Longo unova mutambo wakamira). Iwo akasiyana, kune rumwe rutivi, mitambo yakamira kana zvishoma yakagadziridzwa shanduro yemutambo wekutanga.
Qwixx: Ndezvipi zvakasiyana-siyana zviripo?
Qwixx yakaburitswa makore gumi apfuura (2012) uye zvinotevera zvakasiyana zvakaonekwa zvishoma nezvishoma.
Qwixx XL ingangove idiki kutsauka kubva kune yekutanga vhezheni.Mumutsauko uyu, game block uye dhayisi zvakati kurei zvishoma pane mumutambo wakajairika. Mabhuroki anewo ndima yezita uye zuva. Saka iwe unokwanisa kuunganidza mhinduro dzako zvakafanana uye kuenzanisa mibairo yako.
Kunyangwe kurongedza kweQwixx Deluxe kunosiyana neyakajairwa mutambo. Panzvimbo yebhokisi rectangular unowana yakakura sikweya imwe. Zvinova pachena kuti nei ichi chikwere paunongovhura bhokisi: inovanza diki dice board (rimwe rutivi rwebhokisi rakaputirwa). Panzvimbo pechivharo, iyi vhezheni zvakare ine ina inowachwa mitambo mapaneru. Four? Hongu, nekuti musiyano uyu ndewe (maererano nechinhu chakabatanidzwa) chevanhu vana chete pachinzvimbo chevashanu. Mapeni anogona kugezwa ekunyora patafura anosanganisirwawo nemutambo.
Iyo tableaux ine minda kumusoro kuti uise ako apfuura mapoinzi. Saka kana iwe ukatamba mitambo yakati wandei mumutsara, unogona kuona kusimudzira kwepoinzi yako ipapo.
Qwixx: Mutambo wemakadhi
Qwixx: Mutambo wekadhi izororo rakakura kubva kumutambo wedhayisi. Panzvimbo pemadhayi, unowana makumi mana nemana. dheki ine hutsika 2-12, mune anozivikanwa mavara tsvuku, yero, yebhuruu uye girinhi. Kukosha kwenhamba kwakasiyana kunogona kuonekwa kumashure, asi pasina ruvara. Kune zvakare gumi nerimwe makadhi ejoker ayo iwe aunoda chete kune imwechete yemutambo musiyano.
Iyo scoring block yakafanana neiyo yemutambo wemadhayi. Kuiswa kwemichinjikwa zvakare kunoramba kwakafanana, unoyambuka kubva kuruboshwe kuenda kurudyi, unogona kusvetuka minda, asi haugone kudzima mushure. Musiyano chete: Yakavharwa yakatevedzana ndeye chete kune mumwe munhu yakavharwa.
Pakutanga kwemutambo, makadhi makumi mana nemana anobatanidzwa uye munhu wega wega anogamuchira makadhi mashanu. Iwo makadhi asara anoumba murwi wekudhirowa, kubva mairi makadhi mana akaiswa pachena (kuratidza). Vanhu vave kuita zviito zvinotevera vachichinjana
Tora makadhi akawanda kubva pachiratidziro kusvika wava nemakadhi mashanu muruoko rwako. Chiratidziro chinobva chazadzwa zvakananga.
Kadhi repamusoro remurwi wekudhirowa rinoratidzwa uye nhamba inoziviswa zvinonzwika. Munhu mumwe nomumwe Chivabvu yambuka nhamba iyoyo mune chero mutsara.
ari munhu anoshanda anofanira tamba kadhi rimwe chete kubva muruoko rwako. Nekudaro, anogona zvakare kutamba anosvika makadhi matatu. Kana akaridza kadhi, anogona kurisarudza sezvaanoda. Kana achida kutamba kanopfuura imwe chete, vanofanira ruvara rwakafanana kuva. Munhu wacho anoratidza makadhi uye anosarudza kuti makadhi mangani aanoda kushandisa.
Zvisinei, zvinofanira kucherechedzwa kuti munda mumwe chete inogona kusvetuka. Pa8,9,11 nhamba dzese dziri nhatu dzinogona kukikwa sezvo gumi chete ndidzo dzinosvetuka. Ne 10 chete 2,4,6 na 2 kana 4 na 4 inogona kukikwa, nekuti nezvikwekwe zvitatu minda miviri inosvetuka.
Munhu anoshanda anogona nokudaro kuita michinjikwa miviri (chiito chechipiri nechiito chetatu), munhu anongoita zvaanogona kuita mumwe (chiito chechipiri).
Mutambo unopera kana munhu mumwe apedza mitsara miviri kana kuunganidza zvibodzwa zvina.
Kana iwe uine makadhi ejoker inotamba, unogona kuona kuti ndeupi mavara akatevedzana aunoda kuvashandisira.
The duel imwe 2-munhu mutambo. Mukuwedzera kune dice inozivikanwa uye yakagadziridzwa bhodhi yemutambo, unowana 44 zviratidzo mumavara maviri.
Der Bhodhi remutambo rinoshandiswa nevanhu voset. Panzvimbo pekuisa michinjikwa, iwe zvino isa macheki ako.
Munhu anoshanda anokungurutsa dhayisi uye, sepaQwixx, anogona kushandisa i) hwerengedzo yemadhayisi maviri machena uye ii) hwerengedzo yeruchena uye rumwe ruvara runofa.
chinokosha: Zvose zviito zvinobvumirwa kwete yemunda mumwe chete dzinoshandiswa uye iyo inoshanda chete Munhu anogona kuisa matombo. Kana munhu wacho asingadi kugadzira muchinjikwa, vanoisa dombo uye panzvimbo yakakundikana yekukanda.
Iwo mavara minda anoshandiswa sezviri muQwixx. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona chete kushandisa minda kubva kuruboshwe kuenda kurudyi. Minda yakapfava haichagoni kushandiswa pashure.
Iwe unogona chete kuisa chidimbu chimwe chete pachikwere chega chega, kunze kwekunge chiri icho chidimbu chekurudyi. Semuenzaniso, kana uine dombo pane 6 tsvuku uye ukakungurutsa dhayisi nenzira yekuti unogona kushandisa imwe tsvuku 6, wobva waisa rimwe dombo pane dzvuku 6.
Zvakadaro, chero paine dombo rimwe chete pamunda "wemberi", rinogona kurohwa neanopikisa kana vakakungurutsa dhayi. Unobva wadzosa matombo ako munhu oisa dombo rake kumunda.
Das Munda une dombo rekutanga saka unonyanya kukosha. Sezvo dombo rega rega (kunyangwe rakaturikidzana) rinoverengera kugomba, zvinogona kuyedza kuisa matombo akawanda. Pakarepo kana stack iine angangoita matombo maviri, inogona zvakare haacharohwi kuva.
Iyo chete nzira yekudzivirira iyo stack kubva kukura ndeyekufambisa imwe tile mberi kurudyi.
Sezvakaita Qwixx, mitsara yemavara inogona kuvharwa kana munhu aine matombo mashanu mumutsara uye achishandisa nzvimbo yekurudyi. Zvadaro (kana zvichibvira) anoisa dombo pachiratidzo chekuvhara uye kufa kwemutsara wemavara kunobviswa mumutambo.
Pangosvika kupotsa kwaitwa (vanhu vese vanowedzerwa pamwechete), mitsara miviri yemavara yapedzwa kana munhu mumwe akaisa matombo ese, mutambo unopera.
Pakupedzisira, Qwixx Characters inowanzova imwe kuwedzera Izvi zvinodaro nekuti iwe unoda iyo base mutambo wekutamba uye chete kuwana zvimwe zvekushandisa. Izvi zvine mavara mashanu saka zvinogoneka zvakanyanya. Usati watanga mutambo, unovhenganisa vatambi vakatarisana pasi uye nekusarudzika kupa munhu wega mutambi. Mutambi anorara akatarisana pamberi pemunhu panguva yemutambo.
Chimiro chega chega chinopa chimwe unyanzvi hunokoshat inogona kushandiswa kana munhu wacho kusashanda ndiye (kureva munhu anokungurutsa dhayi). Heino mienzaniso miviri:
Kaviri Dutch inokuita kuti ukungurudze dhayisi kechipiri. Mushure memupumburu wako wekutanga, unogona kusarudza chero nhamba yemadhayisi uye bvisa dhayi zvakare. Ipapo chete (kana kana ukafunga kusadzokorodza) dice inogona kushandiswa nekupinzwa.
miss take inokuchengetedza anopotsa. Kana iwe usingakwanise kana usingadi kumaka bhokisi, haufanirwe kuisa kukanganisa. Uyezve unogona kupinda here paka chero bhokisi - uchifunga nezve yakajairika Qwixx mitemo. Iko kugona kunogona kusamaka bhokisi riri kurudyi.
Qwixx paBhodhi zvakare ndeyekuwedzera kumutambo wekutanga. Mufananidzo: NSV
Pamusoro pezvakajairwa zvinhu (block uye dice), PaBhodhi inopawo bhodhi remutambo rine mativi maviri uye zvidimbu zvina zvemitambo. Uyu musiyano unogona mana chete kutambwa.
Pamberi pemutambo munobvumirana kuti unoda kutamba nedivi ripi. Kana iri nguva yemunhu, vava nezviito zvitatu pane zviviri:
Isa huwandu hwemadhizi machena (zvakare kune vanhu vanongoita).
Pinda huwandu hwe chena uye cube ine ruvara.
Fambisa chimiro chako pabhodhi remutambo ne1-5 nzvimbo dzemahara pabhodhi remutambo. Minda yakabatwa haiverengwi.
Zvakakosha: Munhu wacho anofanira kutara sikweya yenhamba inomhara pane ino jeko kana kuti akatoimaka kare.
Pakazara, munhu anoshanda zvino kusvika pamichinjikwa mitatu ita. Asi iwe unogona chete kuita imwe kana maviri. Pane kungopotsa kana pasina chimwe chezviito zvitatu chinokonzera muchinjikwa.
Pazasi pezvimbo pabhodhi remutambo pane nhamba diki. Pakupera kwemutambo, munhu wacho anowana nhamba iri pasi peunhu hwavo se special points. Kuwedzera kunoita hunhu, ndipo panowanikwa mapoinzi akawanda (max. 20).
Pakangosvika hunhu kune imwe yeminda mishanu yekupedzisira, vamwe vanhu vese vane imwezve kutendeuka sevanhu vanoshanda. Zvino chiyero chinotevera. Mutambo asiwo inopera pakarepo, kana mitsetse miviri yemavara yakavharwa. Pane nzira mbiri dzekupedza mutambo, nemutsetse weruvara unopera uchiridza bhodhi kupera.
NSV - 4024 - QWIXX DELUXE - dice mutambo * 13,56 EUR tenga
Kare Kuvhurwa kweCrowdfunding yakaziviswa yeRunescape Kingdoms: Mvuri weElvarg
Inotevera Kingdom Builder Empire Edition: Humambo huchawedzera hukuru kune yegore
Xbox inohwina paGame Awards 2021: World premieres inoratidzwa
Tiny Tina's Wonderlands: themed imba yemutambo we2.200 euros
Chinhu: Mutambo webhodhi uchatengeswa kuburikidza neAres mushure meKickstarter